Multi asan'izy fanilo, Multifunctional jiro-FS-1001 - China Ksdoing Co., Ltd
Multi fonction Mazava Orb
Mazava Multifunction sifflet
Mini Rotating Fish handheld rechargeable bateria mpankafy
Mini handheld rechargeable bateria mpankafy
Mini Tennis Fanambakana handheld rechargeable bateria mpankafy
Multi asan'izy fanilo, Multifunctional jiro-FS-1001
Ity vokatra no hany jiro mandrakizay ho hihaona. Izany Mitambatra rehetra ny asan'ny jiro nentim-paharazana sy ny zavatra tanteraka VAOVAO & MANOKANA !! Tiavo izany! 300 Lumen Spotlight (avo-Anie-ambany) 6 nitondra Asa Light, 6 nitondra UV / Black Light
INONA NO ATAO HOE ny vokatra?
Ity vokatra no hany jiro mandrakizay ho hihaona. Izany Mitambatra rehetra ny asan'ny jiro nentim-paharazana sy ny zavatra tanteraka VAOVAO & MANOKANA !! Tiavo izany!
300 Lumen Spotlight (avo-Anie-ambany)
6 nitondra UV / Black Light
Red Lens Sivanina
Reusable Mazava Hazokely
Manarona ny LED amin'ny reusable tarafin'ny hazavana ny tapa-kazo. Miverena ny LED tamin'ny nandritra ny 3 segondra. Ianao nandidy ny hazavana vao tapa-kazo. Ankehitriny dia mampiasa ny hazavana amin'ny tapa-kazon'i ny fahazavanao sy hamonjy ny vatoaratra.
Nahoana ny tsingerin'ny jiro amin'ny fotoany avy izy?
Press ka hazòny ny "On" mandra-jiro bokotra akimpiko kely. Ny vokatra miasa ankehitriny ao anatin'ny famonjena angovo tsingerina. Ankehitriny ianao dia afaka hihazona ny hazavana tsy tehina hazavana kosa natopiny ny vatoaratra.
AHOANA NO REUSABLE Mazava MIFIKIRA miasa?
Inside ny reusable hazavana kristaly goavam-be tehina dia ny strontium aluminate. Izany no mamiratra, fa mamaly ny haingana indrindra, ary lava indrindra mamirapiratra hazavana-in-the-maizina eny an-tsena. Eritrereto tahaka ny Mazava Alina kintana ianao hanaraka ny valin-drihana fa steroids.
Inona no mahatonga NY hazavana-in-the-maizina SO mamirapiratra?
Nentim-paharazana hazavana-in-the-maizina avy ao amin'ny vovoka, mieritreritra ny vovo an-tapitrisany kely sponjy izay mitelina fahazavana handidy. Tanteraka indray mandeha nandidy tsirairay sombiny Mamoaka ny ambany lenta hazavana mandra-Nihazakazaka avy amin'ny angovo. Izany no antony nentim-paharazana Mazava Alina dia tsy izay mamirapiratra noho ny poti kely loatra ny vola ny fahazavana dia afaka mihazona sy ataon-drizareo dia kely dia kely. Ity kosa ny hazavana entana kristaly goavam-be ireo, ny sombiny be haben'ny mamela azy ireo bebe kokoa mandray fahazavana sy ataon-drizareo fahazavana misimisy kokoa ho an'ny intsony. Tsy lazaina intsony satria ny kristaly lehibe loatra ny masonao no hahita azy ireo ho toy mamiratra kokoa. Izy ireo toy ny sponjy hazavana be!
NAHOANA UV LIGHT?
Fandefasana ny jiro tsy tapaka ao amin'ny maizina mety hanimba ny alina hanatona fahitana na tsy ilaina tsara ny toerana misy azy, noho izany dia nanome ity jiro iray miasa amin'ny alalan'ny voromby mainty anisan'izany ny jiro. Ampiasao ny mainty hoditra jiro mba vonjeo ny alina fotsiny fahitana na tsy te-hampahatahotra an'ilay trondro eo amin'ny fanjonoana lavitra. Azonao atao koa ny mampiasa ny vokatra mba hahita maingoka, biby stains, marika ny fiarovana, sy ny maro hafa. Izahay tsy nampiasa jiro mena satria tsy hitandrina ny kristaly.
NAHOANA ROA Battery Pack FANDIKANA?
Io jiro dia rehetra sy azo itokisana momba ny manovaova izany isika roa samy hafa ireo mpampiasa fanatitra bateria Packs: 3 AAA vatoaratra (tsy voatery) sy 1 USB rechargeable Lithium Ion bateria.
DETACHABLE MENA family FILTER?
Ampiasao ny sivana family mena izay conveniently toerana eo ambany ny jiro.
Previous: Mazava Multifunction sifflet
Miovaova Light & Mateza Torch
Dual Chargebale jiro
Fitaovana Emergency jiro
Flash Hitany Torch
Jiro sy fanala
Hand tahony Hitany jiro
Hitany Handhheld jiro
High ny famirapiratry ny mazava jiro
High Power Hitany Torch
Kanjo Nahita Diving Torch
Hitany jiro Torch
Kanjo Nahita jiro
Hitany Rechargeable jiro
Kanjo Nahita Strong Light jiro
Hitany Torch jiro
Hitany Torch Light jiro
Hitany Torch Rechargeable
Mahery vaika indrindra Hitany jiro Torch
Multi andrakitra Car Torch
Multi andrakitra Flash Hitany Torch
Multi Function jiro
Multi andrakitra Nahasarika jiro
Multi Andraikitra Hitany Torch
Multi Functional Hitany jiro Torch
Multi Tanjona Torch Light
Fitaovana Multi jiro
Fitaovana Multi Hitany Torch Light
Camping Multifunction jiro fanala
Multi ivelan'ny trano Function Torch
Multifunctional Torch ivelan'ny trano
Portable Multi Function jiro
Portable USB jiro
Rechargeable Hitany Torch
Rechargeable Multi tanjona Torch Light
Rechargeable Torch Light Hitany jiro
Strong Light jiro
Tools Flash Hitany Torch
Torch Light Hitany jiro
tantera-drano Hitany Torch Rechargeable
Address: 5 / F, ianao Shang Mei Building, YanTian, ​​FengGang, Dongguan, faritanin'i Guangdong, Sina